TAFA-PIFIDIANANA : MAP2 : Tena hampandroso ny firenena tokoa - Orlando Robimanana kandidà 35 -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : MAP2 : Tena hampandroso ny firenena tokoa – Orlando Robimanana kandidà 35
Ambilobe, Ambilobe Sirama, Ampanefena, Anivorano, Antsirabe Nord, Antsiranana, Daraina, Mananara Avaratra, Maroantsetra. Ireo no faritra notsidihan’ny kandidà laharana faha- 25 ,Marc Ravalomanana ny zoma sy sabotsy lasa teo.
Ny famelabelarana ny MAP2, izay paikady entina hamahana ny olana sy hampandrosoana an’i Madagasikara no tena votoatin’ny fihaonana tamin’ireo vahoaka. Tahaka ny MAP 1 dia tena mifototra amin’ny fampandrosoana ifotony ity MAP 2 ity.
Ny MAP 2 ity dia niainga tamin’ny Manifesto, izay fanomezan-toky nataon’ny kandidà Marc Ravalomanana tamin’ny vahoaka. Nifampidinihana olona maro izy ity, na teto an-toerana, na tany ivelany. Efa azo antoka ny fanatanterahana azy, satria efa misy ny mpamatsy vola hanohana izany.
Ny Map2 dia paikady hananganana indray ny firenena. Lohahevitra telo no nentina nandrafetana azy dia ny fanatsarana, ny fampiasana ny teknolojia vaovao ary ny fiaraha-miasan’ny rehetra. Misy laharam-pahamehana folo no ao anatin’izany Map izany, dia ny fandriam-pahalemana, ny fitsaboana, ny fampianarana, ny fidiram-bola, ny fotodrafitrasa ny fitsinjaram-pahefana, ny fitokisan’ny vahoaka, ny tontolo iainana, ny soatoavina sy ny hambompon’ny Malagasy ary ny fifandraisana.
Tsapa fa mangetaheta ny fivoarana sy ny fialana amin’ny fahantrana ny vahoaka, ka naneho ampahibemaso ny fanohanany ny kandidà laharana faha- 25, Marc Ravalomanana.
Fantatra fa hihazo ny faritra atsimon’ny Nosy ny kandidà laharana faha- 25 amin’ity herinandro ity.
Orlando Robimanana kandidà 35
Nitafa tamin’ny vahoaka ny boriborintany 6
« Ndao hiaraka hanova ny tantaran’ny firenena, miaraka amin’ny kandidà Orlando Robimanana, laharana faha-35 », io no lohahevitra nentin’ny kandidà nitety ireo boriborintany enina teto Antananarivo. Nisokatra ny sabotsy teo mantsy ny fampielezan-kevitra ho fampandaniana ny kandidà Orlando Robimanana, laharana faha- 35 ho an’ny faritra Analamanga, taorian’ireo fitetezam-paritra samihafa. Tamin’ny alalan’ny vakodrazana sy vakisôva, niarahana tamin’ny Rakoto Frah Junior sy ny Akon’i Rova no nampitana ny hafatra tamin’ny vahoaka, tamin’ireo fokontany notetezina manerana ny boriborintany 6 teto an-drenivohitra. Izany rehetra izany no natao hoy ny kandidà dia ho fanomezan-danja ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy, izay isan’ny laharam-pahamehana ho an’ny kandidà. Tsy hijanona hatreo akory ny hetsika, fa mbola hitohy ary handalo any amin’ireo distrika ivelan’Antananarivo Renivohitra ny kandidà. Amin’ ny heriny tanteraka ihany koa ny kandidà amin’ izao fotoana izao, ary vonona ny hiresaka amin’ny vahoaka manerana an’i Madagasikara, hitondra sy hanazava ny fandaharan’asany.